घर बनाउने ठेकेदार कसरी छान्ने? – Main Batti
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार २०:०२
घर बनाउँदा एउटै ठेकेदारलाई जगदेखि फिनिसिङसम्मका काम दिन पाइन्छ। होइन, संरचना निर्माण, मोडुलर किचन, इन्टेरियर डिजाइन, फर्निसिङ लगायत अनेक कामका लागि फरक–फरक ठेकेदार लगाउँछु भन्न पनि मिल्यो।
तर स्थानीय रूपमा उपलब्ध ठेकेदार होस् या दर्तावाला निर्माण कम्पनी, आफ्नो सपनाको घर बनाउन जो कोहीलाई सजिलै दिन सकिँदैन। राम्रो निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिन कतिपय अवस्थामा लगानी पनि पर्याप्त हुँदैन। यस्तोमा धेरैले रोज्ने भनेको स्थानीय ठेकेदार नै हुन्। सजिलै र केही सस्तो दरमा उपलब्ध हुनाले धेरैलाई ‘लोकल’ ठेकेदारले आकर्षित गरिरहेको छ।
ठेकेदार छनौट र लिखित सम्झौताबिना काम गर्दा नेपालमा ८० प्रतिशत घरधनी र ठेकेदारबीच कुनै न कुनै झगडा पर्ने गरेको पाइन्छ। घरको डिजाइन हेर्न नजानेर आयोजना अलपत्र परेको, समयमा निर्माण नसकिएको वा खर्चिलो बनेको, निर्माणमा त्रुटि आइ ठेकेदार गायब भएका घटना बेलाबेला सुनिरहेकै हुन्छौं। ठेकेदारबारे पूरा जानकारी नलिइ काम जिम्मा दिनाले यस्ता समस्या आइपर्ने इञ्जिनियर सुवास अधिकारी बताउँछन्।
नयाँ बन्ने घर, त्यसमा पनि ढलान गरी बनाइने बहुतले घरमा सानो गल्तीले दीर्घकालमा ठूलै समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले कामदार, मिस्त्री वा ठेकेदार छनौटमा हतार गर्न नहुने ‘बिल्ड इनोभेसन’ निर्माण कम्पनीका निर्देशक तथा निर्माण विशेषज्ञ समेत रहेका अधिकारीले बताए।
उसो भए घर बनाउने ठेकेदार कसरी छान्ने? के-के कुरामा ध्यान दिने?
‘सकेसम्म त हामी दर्ता भएका निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मा दिन सल्लाह दिन्छौं,’ अधिकारीले भने, ‘निर्माणमा केही खराबी आएमा दर्ता कम्पनीहरू जिम्मेवार हुन्छन्। घर बिग्रिएमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ। र कम्पनीले बेहोर्नु पनि पर्छ। निर्माणपछि मर्मत सुविधा पनि हुन्छ।’
यसको विपरित स्थानीय ठेकेदार काम बिग्रिएपछि भाग्ने वा आलटाल गरेर उल्टै घरधनीलाई समस्यामा पार्न सक्ने उनी बताउँछन्। सहरी घरमा हरेक तलामा भान्साकोठा, अट्याच बाथरूमको चलन आइसकेको छ। उनका अनुसार यी सबै काम राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्ने ठेकेदार रोज्नुपर्छ।सजिलै उपलब्ध हुने, पैसामा सम्झौता गर्न सकिने, कम पैसा लाग्ने हुँदा घर धनीले स्थानीय ठेकेदारलाई काम लगाइरहेका हुन्छन्। यस्ता ठेकेदारले वर्षौंदेखि निर्माण क्षेत्रमा काम त गरेका हुन्छन्, तर उनीहरूसँग प्राविधिक ज्ञान र व्यक्ति नहुने अधिकारीको भनाइ छ।
ढल निकासी विधि, पानी, बिजुली आपूर्ति लगायत कुरा अनिवार्य आवश्यकता हुन्। यहाँ पुरानो सीप र प्रविधिले मात्रै काम गर्दैन। ठेकेदारसँग दक्ष प्राविधिक र कामदार हुनु उस्तै आवश्यक छ। भूकम्पपछि प्राविधिकको महत्व अझै बढेको छ।’
सबै व्यक्तिको पहुँचमा निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने बजेट नहुन सक्छ। यदि यसो नभएको अवस्थामा हामीले रोजेका वा कुनै दर्ता नभएका ठेकेदारसँग प्राविधिक पाटो सम्हाल्ने दक्ष छ वा छैन बुझ्नै पर्ने उनी बताउँछन्।
अधिकारीका अनुसार घरको भित्री र बाहिरी संरचनामा परम्परागतभन्दा व्यापक भिन्नता पाइन्छ। यदि ठेकेदारसँग प्राविधिक छैन भने ठेकेदारले नक्सा हेर्न जान्दैन र डिजाइन अनुसार घर नबन्ने सम्भावना बढ्छ।
‘डिजाइन अनुसार काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। ऊसँग प्राविधिक भए मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा डिजाइन वा प्राविधिक गडबढी भयो भने ठेकेदार भाग्न सक्छन्। घरको लागत र नोक्सानी दुवै घरधनीले नै बेहोर्नुपर्छ।’
तर ०७२ को भूकम्पपछि दक्ष कामदार र प्राविधिकको महत्व खुलेको उनी बताउँछन्। हिजोआज स्थानीय ठेकेदारसँग प्राविधिक पनि हुन्छन्। तर उनीहरूको कामको स्तर यसै नाप्न भने नसकिने उनले बताए।
‘हिजोआज घरको नक्सा डिजाइन गर्ने कम्पनीसँग घरधनीले घर निरीक्षण प्याकेज लिनसक्ने सुविधा आएको छ,’ उनले भने, ‘यो सुविधा प्रयोग गरेर पनि स्थानीय ठेकेदारसँग काम गर्न सकिन्छ।’
यस्तै ठेकेदार छनौट गर्दा उसले निर्माण गरिदिएका पहिलेका घरहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। घरबेटीसँग घर निर्माणको चरणमा कुनै समस्या आइपरे वा ठेकेदारसँग काम गर्ने वातावरणका बारेमा बुझ्न सकिन्छ।
‘लोकल ठेकेदारसँग प्राविधिक छ भने पनि काम गर्ने टिम, काम गरिरहेको साइट हेर्न वा काम सम्पन्न भएको घरबेटीसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलेका घरधनी उक्त ठेकेदारको कामबाट सन्तुष्ट नभए बेलैमा अर्को विकल्प खोज्न सजिलो हुन्छ।’
यो कुरा स्थानीय ठेकेदार र निर्माण कम्पनी दुवैको हकमा लागू हुन्छ। सबै कम्पनीले राम्रो काम गर्छन् भन्ने हुँदैन। पहिलेको काम र घरबेटीसँग परामर्श लिँदा थप स्पष्ट हुन सकिन्छ।
ठेकेदार रोज्दा पैसाको कुरामा लिखित सम्झौता नै गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। लिने र दिने पक्षबीच स्पष्ट नहुँदा काम अलपत्र पर्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर घरधनीलाई धेरै पर्ने उनको अनुभव छ।
‘स्थानीय ठेकेदारले मानौं १५ लाख मागिरहेको हुन्छ। यता घर धनीले १२ लाख मात्रै दिन्छु भनिरहेका हुन्छन्। ठेकेदारले आफ्नो जिद्दीमा काम सुरू गर्छ,’ उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘मौखिक र लिखित सम्झौता गरी कामको किसिम र भुक्तानी प्रणालीबारे सहमत भए धेरै समस्या कम गर्न सकिन्छ।’
२४ घण्टामा ६९५१ जना निको हुँदा ४४७२ संक्रमित थपिए